Su'aal: Daawo siinta uurleyda?
Author Topic: Su'aal: Daawo siinta uurleyda? (Read 6233 times)
« on: March 04, 2011, 10:45:25 AM »
salaan sare dhamaan bahda webkan gaar ahaan dhaqaatiirta waxaa iga jaahil saartaan dumarku markay uurkaleeyihiin ma intuu yaryahay buu qaadankaraa daawada mise markuu wayn yahay mise time baa u xadidan maxaase uu qaadankaraa 3bilood dawooyinka sharoobooshinka iyo kuwa inj maxaa la siinkaraa infactionka faraha badan ilaa heer aanay kaadida xejinkarin tabcaan farabadan oo dumarka qaar yeeshaan
Re: Su'aal: Daawo siinta uurleyda?
« Reply #1 on: March 04, 2011, 08:29:31 PM »
Xilliga uurka waxaa caafimaad ahaan loo qabiyaa sadax marxaladood oo midiiba ay sadax bil ay tahay.
Daawooyinka la qaato waxay saameyntoodu ku xirantahay xilliga ay haweentu uurkeedu marayo.
waxaa jira daawooyin sadaxda bil ee uurka hore aan hooyadu la siin karin waxaa kaloo jiro daawooyin kale oo aysan hooyadu qaadan karin bilaha dhexe ama bilaha dambaba.
Haddii daawo loo soo qoray hooyo uur leh waa in ay takhtarka weydiisaa dhibka daawada ay u keeni karto.
« Reply #2 on: March 05, 2011, 01:47:53 PM »
waxaad iigu celisaa dr re sadexda marxaladood ee uurleyda iyo kuwa dhibka keena daawooyinka mase keeni karaan amoxycilline ampicilline iwmcephlexine buscopan spasmo tal tabs amicof sy tussilar iyo sy anti cough ah maxay side effective leeyihiin good by to dr
« Reply #3 on: March 07, 2011, 05:51:33 PM »
Sadexa marxaladood midiiba waa sadax bilood, waxaa badanaa daawooyinka ay dhibaato keensadaan 3-da bil ee ugu horreysa inkastoo ay jiraan daawooyin aan la siin karin hooyada 9-ka bilood ay uurka leedahay.
Waxaa kaloo jiri kara daawooyin dhibaatooyin sameeya xilli gaar ah sida 3-da bil oo dambe tusaale ahaan.
Daawooyinka aad na waydiisay kala xiriir takhtarka kuu qoray si dhibaatada iyo waxyeellada ay leeyihiin kuugu sheego.
Ha u takhtarayn xaaskaaga haddii aadan aqoon u lahayn cilmiga daawooyinka.
« Reply #4 on: March 08, 2011, 08:22:47 PM »
Waxaan filayaa in qoraalkaan aan qoray 2008-dii in aad ka faaideysan doontid
Isticmaalidda Daawada Xilliga Uurka
Views: 6990 November 02, 2007, 07:35:10 PM
Views: 29971 May 28, 2015, 10:04:42 PM
Views: 11312 June 24, 2011, 02:26:05 AM
Views: 5298 May 19, 2012, 04:31:50 PM
Views: 46185 August 15, 2015, 02:42:07 PM